အဲဒီနေ့က လမ်းမှာတွေ့တာ ကောက်ကြည့်တော့
အဲဒီနားမှာ ဘာရှိလည်း ....
အိုကွယ် ... ငိုချင်လိုက်တာများ ... ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ဘုရားတရားတမိ ...
ဘယ်မှာ ... ဘယ်မှာ ....
က ... ခ ... ဂ ... ဃ ... င ...
။... သုည ...။
သုံးစက္ကန့်ခြားဆီ တခါရွတ် ... ရွတ်လိုက်တိုင်း ... ဂလိုဏ်သံပေါက် ...
ဟော .. ဟော ... အခုလှမ်းမြင်ရတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီး ချွေးရဲရဲ သံရဲရဲ နဲ့ ... ။
လာပြီ ... လာနေပြီ
လာနေကြပြီ ..... ။
နာရီက ( ...း...း... )
( Latitude: ..... )
( Longitude: .....)
များမကြာမီ ..... ။
ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် ... အိပ်မက်တွေ လွန့်လူးလာမှာကြောက်လို့
... ငါက ...
စိတ် အထွက် နဲ့ ကာမိ ...
ကောင်းကင်မှာ ဖုန်တက် ... အာရုံထွေးပြားခြင်းက .. စိုးထိတ်မိ ...
ထွက်မသွားပါနဲ့ ... ထွက်မသွားပါနဲ့ .....
... ဒီ အမိုးက ... ဒီ နံ နဲ့မှ အံကိုက်မို့လို့ပါ ...
ငါ လဲ ငါမဟုတ်တဲ့ ကိုယ်ပွားလေးကို နှမြောမိ ...
ငါ့ ကို ငါ ပြန်လည်ရှာဖွေမိတော့မှ ငါက ပွတ်ကြိတ်သံနဲ့တင် ဖျား နေတဲ့ ... ” လူ “ အတု ....။
ထောင်းထောင်းကျေ ခရာပြတ်နဲ့ လတ်တလော များ
သူက .. ငါက (လူ အတု)
ပွင့် ရာ လင်း ရာ နေထိုင် ရာ
အမှတ်မထင် ( ) လမ်း ထောင့်မှ မျက်စိ တစ်မှိတ်
ငါ ..... .....
ခုနှစ်သံပါး အရိပ်အခြေတောင် နင်းပြီး ....
ခန္ဓာအောက်ကြော က အောက်စူးစူးရနံ့ကိုရ ....
ဘာဆိုဘာမှ မရှိလိုက်ဘူး ...
အားလုံး ( ) ...
ရက်သတ္တပတ် ၈ ရက်အကြာမှာ ..
ရှိုက်သံကို နားစွင့်ခဲ့ရော .. ပြီးမှ ... မှားသွား ...
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ...
ပါးဟပ်တွေ အနံ့ကို ခင်းကျင်းပြသထားတဲ့ ပွဲမှာ....
သူက လေမရှုပဲ ... ကွဲနေတဲ့ ... စကားလုံး ...
ရှိ (ရှိနေ) ဦးမှာလား
ဟော ဟိုးနား ..... ခလုတ်ထိ ပြီး တ . တ
ငါ ရူးပစ်လို့ရမလား .....
ငါ့အဆင့်က ၉ ဆင့်လောက် ပုနေရဲ့။
ငါ မှ ငါ။
ကိုယ့်လေနဲ့ကို တိမ်နဲ့ ခေါင်းနဲ့ စောင့်တဲ့ ကောင်ကငါ။
တကယ်တော့ ငါက ကိုယ့်နေရာကိုယ်မသိပဲ ပလ္လင်ပေါ်တတ်ချင်တဲ့ ငနဲ။ ..... ။
Author: ဗလာ Posted under: ကဗျာ, မိဝတီ
ဒီကဗျာလေးကတော့ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက် ခံစားရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ကဗျာလေးပါ ... သူက သူတစ်ဖက်သက်ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေးကို ``မိဝတီ´´ လို့ နာမည်တွေ ပေးပြီး ကဗျာရေးတတ်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့နေရာက ခံစားပြီး သူ့အတွက် လက်ဆောင်ပေးဖို့ ဒီကဗျာလေးကို ရေးလိုက်ပါတယ်။ ခံစားပေးကြပါဦးနော်. ။ (ဗလာ)
ရင်ဝှက်အံဆွဲရေ ..... ..... .....
ငါ ..... ..... ..... ..... .....
ပြီးခဲ့သော၊ ယခု၊ နောက်နောင်
နှင်းရည် နှင်းလက် အခက် ခြင်းယှက်
၀န်ရိုးစွန်း ဂုဏ်သတ္တိတွေ ပြည့်ဝတင်းကားနေတယ်...................
၂၄ နာရီ ဥပဒေသမှာ ငါက ခရုကမာ ဆိုတာ
နင်မသိခဲ့ခြင်းထဲက တစ်ခုတစ်လေသော မှတ်တမ်းပေါ့.......
လျှစ်လျူ မျက်ကွယ်... ပြုရက်လေလား..ကောင်မလေး...........
နှင်းခါး၊ နွေခါး၊ မိုးခါးရေလည်း မသောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး............
အမာရွတ်နဲ့ အခွံ့က ကိုယ့်အဆန်ကိုယ်မုန်းမိလိမ့်မယ်.......
ဒီလိုနဲ့ ရာဇ၀င်အပ်ဖျားမှာ ကောင်းကင်မြေကြီး ဂဟေတို့
ဖားတစ်ပိုင်း ငါးတစ်ပိုင်းဘ၀ကို မသာယာနိုင်လို့လေ..................
ဘာကိုမှ မငြင်းပယ်ကြောင်း သက်သေတွေပါပဲ........
တွဲသွားမှာပါ ချစ်သူ... ဆွဲသွားမှာ မဟုတ်ဘူးလေ........
တစ်ချက်လောက် ဖြစ်ဖြစ် နင်းပါ.. ဒီအရိပ်ကို နင်းကြည့်ပါ........
ဒီကမ္ဗျည်း သွေးစို့စို့ရှိကြောင်းကို တော့
နင်ရော ငါရော ပန်းပွင့်တွေမဟုတ်ဘူး
ဥယျာဉ်မှူးတို့ မာန်မာနသာ ကိန်းဝတ်နေခဲ့တယ်.....
လှေကားချိုးတဲ့ နာမည်စာရင်းထဲ နင်အ၀င်မခံနဲ့နော်......
ငါ့လက်နဲ့ နင့်လက် စည်းဝါးနရီညီညီစီစီရှိနေရမှာပေါ့......
နင်ဖွင့်ဟမယ့် ခွန်းဆင့်အက္ခရာတွေသာ ကြည်လင်ပါလေ့စေ
ငါ့နှလုံးအိမ်မှာ သေနင်္ဂတွေ စူးရဲရှတပြီးသား.............
လည်ချောင်းသွေးနံ့တွေ သွင်းပြီး ကျမ်းကျိန်ဝံ့ပါတယ်.........
ပန်းတိုင်အပြုံးကို ခူးဖို့ ပိုပြင်းပြပါ့မယ်လေ.....................................
ညနဲ့ သူ့ရံရွေဖော် အလင်းပြန်အရိပ်ကို
ဘယ်သူ တိတိရိရိ ဖြတ်သွားပါလိမ့် ......
အနှစ်နှစ်အလလ ရစ်ခြုံသိုင်းထားတဲ့ အခိုးငွေ့တန်း
ဆေးတစ်စမှ မစပ်ဘဲ သေသပ်စွာစီထားတယ်.......
ငါ့ကို ပြန်ပြီးပျိုးတဲ့ ဇီဝဗေဒ ပိုးဝိညဉ်လေးရဲ့
မြားဦးနဲ့ ပစ်မှတ်ရဲ့ ဆုံချက်ရောက်ရင်သိရမှာပေါ့.......
လေးညှို့ နဲ့ လေးကိုင်းက အခုမှတုန်ခါပြီးစ........
ရင်ခွင်တစ်ခုလုံး ကုန်တဲ့အထိ ......
လက် နဲ့ ပျိုးမှ ပန်းတဲ့လား
ငါကတော့ ကိန်းတန်းတွေမပါပဲ ပျိုးလိုက်ပြီ.....
သီးသန့်ဆန်တဲ့ ခရာသံနဲ့ပဲ ပျိုး.... လိုက်.... ပြီ.....
၀ိညဉ်သီးတဲ့ လက်ဖျားအတွက် ရည်စူးပါတယ်
ငါက အဲဒီထိပ်ဖျားမှာပဲ မှေးစက်နေရတာလေ...
ခါမချလိုက်ပါနဲ့ ..... ဇာပ၀ါ...........
ရနံ့ နဲ့ ၀တ်မှုန်မရှိဘူး........
ငါကတော့ ဦးပေါင်းကို မြေ၀ပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီ.......
ပုံသေနည်းမဆန်ချင်လို့ နေသံကို...... တောင်နံရံနောက် ညွတ်ဆင်းစေလိုက်ပြီ.............
ကြိုးကွင်း..... ဓါးစက်တွေက ရုပ်နာမ်ခွဲရုံသက်ပါ....................
မြိုင်တော နဲ့ ဥယျာဉ်
လူတကာပြောတဲ့ အမှန်ကို တော့ မလိုချင်ဘူး...
နေဖြစ်ဖြစ် လဖြစ်ဖြစ် ညှိမ်းပေးလိုက်မယ်..........
သူတစ်ဦးတည်းနဲ့ လင်းမြတောက်ပ ပါလေရဲ့....................
အခု ........ ဒလက်တွေနဲ့ ဒလက်တွေနဲ့
အညိုရောင် စွဲစွဲ လက်တက်တွေနဲ့
စွဲဆိုချက် = သေကြောင်းကြံစည်မှု
တရားခံ = တိမ်တိုက်
ပြစ်ဒဏ် = နောက်တစ်ကြိမ်တိမ်ဖြစ်ခွင့် ဆိုင်းငံ (၄) လ
ကြယ်တစ်ပွင့်တည်းအတွက် တည်ရှိရာနေရာကို အမည်မပေးရသေးပါ။
ရှိနေတတ်သော်လည်း ပစ်စလက်ခတ် စီရီထားခြင်းများဖြစ်၏။
မရွာသောမိုး မရွာ (သို့) မရွာသော် မိုးမရွာ
ရွာသောမိုး ရွာ (သို့) ရွာသော် မိုးရွာ
မရွာသောမိုး ရွာ (သို့) မရွာသော် မိုးရွာ
ရွာသောမိုး မရွာ (သို့) ရွာသော် မိုးမရွာ
သော်လည်း၊ သော်လည်း၊ သော်လည်း၊ သိုမဟုတ်။
ငလျင် ..... ပြန်လည်တည်ဆောက်
မုန်တိုင်း ..... လေပြေဝေ့သီ
တစ်ခုပြီးတိုင်း တစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်မက
ဒီလိုနဲ့ ရက်ရာဇာလေး အသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့ပြီ။
ရင်ဝှက်အံဆွဲရေ ကျေးဇူးပါပဲ ....
မိုးအရွာမှာ ထွန်ချခဲ့ပါတယ် ..... ။
“တစ်ခါတစ်ချီ ရူးဖူး/ရှုံးဖူး သူများရဲ့ မှတ်တမ်း ”
အိပ်မက်တွေ မရှိတဲ့ အရပ်မှာ ဂယောင်ခြောက်ခြား ပြစ်မှုတွေအတွက် နီသွေးသက်သက် နံနက်ခင်းကိုပဲ သူတို့ ပိုင်ကြရတယ်။ တောင်တန်းတို့ရဲ့ ကြွေးဟစ်ခြင်းတွေ လွန်ခဲ့တဲ့အချိန် ............................................
၁၆ စိပ်စိပ်ထားတဲ့ ပရ၀ဏ်အဖြူအစိမ်းထဲမှာ၊ စံရိပ်ငြိမ်ကားမှတ်တိုင် နဲ့ မြေအိုးမြီးရှည်တစ်ပွဲစာထဲမှာ၊ အရမ်းနုရောင် ရက်သတ္တပါတ်တွေထဲမှာ၊ ကိန်းကဏန်းတို့ ပြုစားချင်းထဲမှာ၊ ယမကာတန်းလျားရဲ့ ညသက်ရှည်တွေထဲမှာ ........... နေ့သင့်နာမ်သင့် “အ” သွားခဲ့ကြရတယ် ........
(အဟောင်းဆိုင်က စာမျက်နှာ အဟောင်း)
တစ်ချို့ .... လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ရေတွက် .... “တစ်...နှစ်...တစ်ဆယ်...တစ်ရာ..............” လောလောဆယ် ကောက်နုတ်ချက်လောက်ဆိုရင် မေချင်ယောင်ဆောင်သူဆောင် .... ယောင်ပြ ပစ်စလက်ခတ်ဆန်ဆန်ထား ..... နာမည်ထိုးသူထိုး .... ကဗျာရေးသူရေး .... တစ်ချက်နှစ်ချက် ခိုးရှိုက်ကြတယ်... လူကွယ်ရာမှာ ရှရာတစ်ဝက် အပိုင်ဖျက်သလို မှောင်ရိပ်ရှာ ၀ှက်တတ်တယ် .... သူတို့ ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်မဟုတ်သလို ပစ်ရမှာလည်း သဲတစ်ရှပ်ရှပ် ကျည်ဆန်ရာမှာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ မှေးမှိန်နေကြတယ် ................
တရွတ်ဆွဲသွားတဲ့ ဒြပ်မဲ့တစ်ခြမ်း တစ်ဖဲ့စာ လမ်းကြောင်းသေမှာ ဖက်အုပ်တွယ်ထားချိန်မှာတော့ ..... ကြယ်တစ်လုံးသာ ရှိတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့ ဆယ်စုနှစ် ပတ်ပျိုးကို စကားပန်း တစ်ဝါပွင့် နိမိတ်တို့ မှင်နီစူးဖို့ အဘိဓမ္မာ တစ်အုပ် နဲ့ လက်လုပ်လက်စား ရုံးဆင်းချိန်တိုင်း တသွင်သွင် ပစ်သွင်းနေကျ ပိုက်ကွန်တစ်ခု ယက်ထားကြတယ် ....
ညွှန်းမစေရဘဲ အမှောင်ကပွဲထဲမှာ ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းကို အလိုက်တသိဖြို ..... ငါးတစ်ကောင် တိမ်ငတ်ပုံမှာ ... ၀ါပန်းတွေ ဘာလည်းမေး......... ပြီးခါနီးလက်တစ်ဖက်ကို ကမ္ဘာဦး ခိုးရာပါ ပစ္စည်းထံ အပ်လိုက်တယ်. ..... ရပ်ဆွေရပ်မျိုးရှားပါးတဲ့ အခေါ်ဝေါ်နည်း နာမည်တွေကို ...... ပြန်ရွတ်ဖတ်တဲ့ ပွဲမှာ လက်သုတ်စုံခူးရအောင် ......... ပန်းသီးမကိုက်တတ်သူတွေ မပါတဲ့ ဒီစကာကြောင်းတွေကို ပြန်ခေါ်လိုက်ပါ... သတိရရင်တော့ ပြန်ခေါ်လိုက်ပါ ............
(ပူပူနွေးနွေး ပြန်နွေးထားတဲ့ ခရာသ)ံ
“ ... ပန်းပွင့်တွေ မကိုက်ဖဲ့ရက်တဲ့ ပိတုန်းတစ်ကောင် အပြုန်းတောမှာ စကားဝါမှတ်ချက်နဲ့ အစာငတ်သေ ... ”
“သေစားသေစေ အမိန့်တော်မဖတ်မှီ ..... ရင်ဘတ်တစ်ခြမ်းကို စို့နဲ့ရိုက်ပြီး
ကောင်လေးတစ်ယောက် အက် .... ကြေ ... ကြွေ ... ”
“ .......... ကြယ်ကိုမော်မကြည့်ဝံ့သူက နက္ခတ်ကို မရှုစားချင်သင့်ဘူး .......... ”
“ .......... ဆင်ဆွယ်ထိုး တယောတစ်လက် နောက်ကျောဓါးကို မုန်းတယ် .......... ”
“ ..... ခြွေ၊ ၀ှက်၊ သတ် ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နတ်ပျိုမ .....”
“ ..... နိမိတ်နီအတွက် ဇာတိကဗျာရေးနေ ..... ”
(စိတ်တစ်စအကြွေကောက်သူတို့ အခြမ်းဆုတ်မွှာ ပြက္ခဒိန်)
အပြာ၊ အစိမ်း၊ အနီ၊ ခရမ်းနု၊ အ၀ါ ......... ဒီအရောင်တွေ သက်သက်တောက်ပဖို့ ကောင်းကင်တစ်ကိုင်းလုံး သက်တန့်လုပ်ပေး ....... ကိုယ့်ကိုကိုယ် ... မထိခဲ့လေခြင်း ..... ရွတ်ရင်းနဲ့ ရေပြီးမှ သေပြီးကြောင်းသိ .... မျက်နှာပြင်တိုင်း ဆွေး ... တစ်ခါ ... နှစ်ခါ ... လက်ဖျား မခါကြနဲ့ဦး ..... လက်စုံမိုးပြီးအိပ်မက်မက်ခဲ့သူတို့ တရာတသီစာမက သတ်သေသွားခဲ့ကြောင်း .... မျဉ်းတွေ၊ ဆေးတွေ ငြိမ့်ညောင်းညောင်း ခရီး မှိတ်မှိန်တိုတောင်း ..... တာဝန်မဲ့စွာပဲ .... ဂျီသြမေတြီ ... အယ်လ်ဂျီဘရာ ... ဈေးကွက်ပက်လက်လန်တဲ့ လမ်းဆုံး .........
မျက်ရည်တစ်စိတ်လောက် ခေါင်းငုံပေးပါ .........
ငိုရင်း ........... ငိုရင်း ............ ငို ......
မျက်ရည်တစ်စိတ်လောက် ခေါင်းငုံပေးကြပါ .........
လဲလျောင်းနေသော ရုပ်ဝတ္ထု (သက်ရှိ / သက်မဲ့)
နေခြည် သို့မဟုတ် အသားစိုင်
တိုက်ကပ်နာရီ / နံရံကပ်နာရီ
၁ ..... ၂ ..... ၃ ..... ၄ .....
..... မျက်လုံး .....
တာဝန်မှ အနားမယူနိုင်သေးသော / အနားယူပြီးသော
မျက်လုံး / များ
အရောင် ..... သစ်ရွက် .....
ကြွေ ..... ဖူး .....
လဲနေသူ ..... ထူမပေးပါနှင့်တော့
ထိုင်နေသူ ..... မငိုကြွေးပါနှင့်တော့
နေရောင်ချည် ... အသားစိုင်
မှိုင်းညစ်ညစ် (သို့) တိတ်ဆိတ်မှု
အားလုံး ..... ..... တစ်ချို့ .....
သို့သော်လည်း ..... ..... သို့သော်လည်း ..... ..... သို့သော်လည်း
ဒူ ..... ဝေ ..... ဝေ
ဖန် နဲ့ ယက်တဲ့ ပေဖူးလွှာ (သို့ ) `ချစ်သူဖတ်ဖို့ ကောင်းကင်ဖတ်စာ´
အဲဒီလောက်အထိ မခြားပါဘူး .......
နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ငိုဖို့ မျက်ရည်မလောက်ဘူး .......
ကဲပါလေ `လာအတူသွားစို့´ .......
စစ်ပွဲမရှိတဲ့ တိုင်းပြည်လား ..... သူသေမရှိတဲ့ မြေပြင်လား
ကောင်းကင်အမိုးနဲ့ လွတ်ရာလား ..... ပန်းပွင့်အကာနဲ့ ဝေးရာလား
တစ်ယောက်ထဲသွားရမယ့်နေရာလား ..... လက်တွဲခေါ်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာလား
အခု ... တော်ကြာ .....
ကမ္ဘာရဲ့ သက်တန့်တွေရဲ့ အိမ်ကိုလား (အိုဇုန်းလွှာ အကောင်းကြီးဆိုရင်တော့ ဒါကမ္ဘာအတုကြီးပဲ)
..... ..... ..... ဒီလိုနဲ့ ..... ..... .....
..... `ရင်ဝှက်အံဆွဲ´ ရေ နားထောင်လှည့် .....
....... ချစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြမယ် .......
ဟုတ်ပါတယ်ကွယ် ..... .....
ကိုယ်က မရေရာတဲ့ အနာဂါတ်နဲ့ လောလောလတ်လတ် `အန္ဓ´ ပါ .......
ဆို့ဆို့နင့်နင့် သေချာလိုက်တာကွယ် ..... .....
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြည့်မှ ဓါးသွားကိုက်ထားတဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံးဖြစ်နေမှန်း .......
အလွမ်းစိတ်နောက်ကိုလိုက် ..... ..... ရေဆုံးမြေဆုံး ပန်းပွင့်
သူ လွမ်းနာကျသွားခဲ့တာကို ဘယ်ပရပိုက်နဲ့မှ ကာတားပိတ်ထားလို့မရခဲ့ဘူး .......
တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန် အရိုးရှင်းဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာတွေ ပြောပြရရင်
လက်လွန်ခြေလွန်နဲ့ ဘယ်ဘက်မြို့တော်မှာ မြားဦးတန်းလန်း ..... ..... ..... .....
ဒီလူကနန်းကျပေးခဲ့တာလေ ....... .......
သိမ်းလှည့်ပါ ..... ဓါးကျိုး လှံကျိုးတောင် မသုံးပဲ အဘယ်လက်နဲ့ ခတ်ရင်ကို ကြွေစေခဲ့လည်း
``တောက်တောက်ပပ ပြောကြစတမ်းဆိုရင် ငါ့ကောင်းကင်မှာ ငါ့ကြယ်စင်အလင်းဆုံး´´
ရင်ဝှက်အံဆွဲ ရေ ..... .....
ချစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောမယ် ....... ....... .......
တွဲ ..... မြဲ ..... မြဲ ..... တွဲ .....
တံခါးနံပါတ် (၁၉) အလွန်မှ လည်ပြန်
ပန်းပွင့်ကို မီးတင်ရှို့ပြီးသတ်ခဲ့တယ် ...... စကားပန်းတို့ လူလားမမြောက်ခင်ကတည်းကပေါ့ ..... လင်းဝေးအိပ်ခန်းနံရံတို့ဆီ ..... စိတ်ကူးတို့ကျဲပေါက်လိုက်တော့ ခြေ (၂) လှမ်းစာအပြီးလောက်က ယာလက်ဖ၀ါးရဲ့ ဒါဏ်ရာတွေကို ညတာရှည်ဖို့ ရောင်းမထွက်တဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခု ဖြစ်စေလိုက်တယ် ....... နှုတ်ခမ်းတွေ မမည်းသေးခင် ကိုယ့်ခြေ ကိုယ့်လက်နဲ့ ဆောက်ထားတဲ့ နေရာမှာ ..... သွေးအကပ်ကပ်ဖုန်အလူးလူး ..... ရူးမွဲရော်ခြောက် ..... ကျွန်တော်လက်မမြှောက်ခဲ့ပါဘူး “မေမေ” ..... ..... ခရီးရောက်သမျှမှာ .....ဒူးမထောက်ပါဘူး ..... ပြုံးပါ ..... ပြုံးလိုက်ပါ “မေမေ” သားတည်ထားတဲ့ ဝေနုဥယျာဉ်မှာ နေ့တိုင်းညတိုင်းဦးခိုက်ချင်တာက ..... လင်းလင်းပွင့်တဲ့ မေမေ့ အပြုံးပါ “မေမေ”.....အသံတို့တည်ရာ ..... ပန်နိုရာရဲ့ နားခိုရာ ..... လွတ်ပွင့်သူရဲ့ မှန်းတည်ရာက ..... မေမေ့ မေတ္တာ မငတ်ခဲ့တဲ့ ငါးတစ်ကောင်ရဲ့ ရေမနည်းခဲ့တဲ့ စက္ကန့်တွေပါ “မေမေ” ..... ..... အချက်ချက် အလက်လက်တွေ ကို မေမေ ရေးဖတ်ပြခဲ့တယ် ..... “မေမေ” ရောက်ရာပေါက်ရာက ကျွန်တော်ခေါ်နေပါတယ် .....
ဘယ်လိုပြောပြော မရိုးနိုင်တဲ့ ဆိုနာတာက မေမေ့ နှုတ်ဖျားက သားမကြားခဲ့ရတဲ့ အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေပါ “မေမေ”..... ကျမ်းကျိန်ပြပါ့မယ် ..... ရည်ရွယ်ရာပန်းတိုင် ..... မေမေဖြစ်စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ရာ ပန်းတိုင် ..... “ဟုတ်ကဲ့ပါ မေမေ” ..... သားပြေးနေပါတယ် ..... ရောက်မှာပေါ့မေမေ ..... ရေတစ်ခွက်လောက်တော့ မေမေ ကမ်းပေးမှာပါ ..... ဇင်ယော်ဆိုတာ လှိုင်းသင့်စမြဲပါပဲ “မေမေ”..... ..... ကျွန်တော် ယက်ဖောက်ထားတဲ့ ကောင်းကင်မှာ နီလိုက် ပြာလိုက် ဖြူလိုက် ..... “မေမေ” သားအိပ်ကပ်လည်း ကွဲခဲ့ဖူးပါတယ် ..... အိပ်တန်းပြန်ရာမှာ မေမေ့အိမ်က အအေးမြဆုံးပါ “မေမေ” သူလိုငါလို သီချင်းသံနဲ့ ပုခက်ကို ကျွန်တော်လွမ်းပါတယ် “မေမေ” ..... ပြည်လမ်းမထက်က ပြန်လာတိုင်း လက်ဆွဲခြင်း နဲ့ ကြက်ဥအပြည့်ထည့် ကျွန်တော်တို့သားအမိ ..... လေရူးတစ်ခုကို အတူတွန်းဖယ်ခဲ့ကျဖူးပါတယ် “မေမေ” .....
ပြောပြပေးပါ “မေမေ” သား အလွမ်းနဲ့ အိမ်လေး အိပ်မက်ထဲမှာ ရှိခဲ့ဘူးကြောင်း “ဖေဖေ့” ကိုပါ ပြောပြပေးပါ ..... တစ်ခါနှစ်ခါထက်ပိုပြီး ရက်ရက်ရောရော မိုက်မဲ တတ်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ လွန်ကြူးမှုတွေကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ပေးပါ “မေမေ” တောင်းပန်စရာမလိုဘဲ မေမေခွင့်လွှတ်တတ်မှန်း သားသိပါတယ် “မေမေ” ဒါပေမယ့် တောင်းပန်ပါရစေ ..... “ဖေဖေ” လည်း နားလည်ပေးတတ်ခဲ့မှန်း အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်လေ ..... ခြေနှစ်ဖက်လုံနေရုံနဲ့ အရိပ်တစ်ခုကို သားခြုံခဲ့ဖူးပါတယ် “မေမေ နဲ့ ဖေဖေ” မေတ္တာနဲ့ ဝေးပေမယ့် မေတ္တာ မငတ်ခဲ့တဲ့ အတွက် လောက ထဲမှာ ကျေးဇူးအတင်ဆုံးက “မေမေ နဲ့ ဖေဖေ” ပါ ..... သားအိတ်ကပ် အကွဲ အတွက်လည်း မကြေမွတတ်တော့ပါဘူး ..... ရှိပါစေလေ ..... အရေထူထူဖြစ်ဖို့ ဒါဏ်ရာတစ်ချက်လောက် စတေးတတ်ဖို့ “မေမေ” သင်ပေးခဲ့တယ် “ဖေဖေ” ပြသပေးခဲ့တယ် ...... အခု ..... ..... ..... ..... .....
အချီချီကျိတ်ပွတ်ပြီးသား နေရာတစ်ချို့ ..... မြေကျိုးဖုန်းဆိုးတွေကို ယာကောင်းကောင်းညက်အောင် သားကွေးညွှတ်တတ်ပြီ ..... လက်တစ်ကမ်းကမ်းပေးထားတဲ့ အဖော်တစ်ဦးရှိတယ် ..... ၀န်းရံကာစီးထားတဲ့ သင်္ဂဟ ပရပိုက်တွေရှိတယ် ..... ဖေဖေတင်ပေးခဲ့တဲ့ စင်တစ်ခုပေါ်မှာ ..... ကျွန်တော် ဖောဖောသီသီ ၀န်ခံချက်တွေ နဲ့ အမှန်တစ်စုံတစ်ရာအတွက် အမှားနဲ့ အလဲအထပ်လုပ် နောက်မမိုက်ဖို့ နားထောင်ကောင်းရုံ ဖောက်ထွက်ခဲ့ ပြီးပါပြီ ..... ..... လက်စစ်စစ်တွေ နဲ့ ရင်ခွင်စစ်စစ်တွေ နဲ့ “မေမေ နဲ့ ဖေဖေ” သားအရိပ်ကောင်းကောင်းမှာ နားနေခဲ့ရမှုအတွက် ကျေကျေနပ်နပ် ဆုတောင်းပြုပါတယ် ..... ..... ..... .....
“ ဝေးက ဖေဖေ နဲ့ မေမေ တို့ ကိုယ်ကျန်းမာ ပါစေ ..... ..... စိတ်ချမ်းသာ ပါစေ”
ယူတုန်းက ယူထားကြပြီးမှ ဘုရားတရားတ
ကယ်ပါ ..... .....
လောကဓံ ခြေဖျားမှာ အချခံလိုက်ရတဲ့ “ဘ၀”
အမြဲမှားနေတာက ကန်းမှန်မသိတဲ့ လက်တွေ
တိုး မြဲ တိုးနေတဲ့ ရက်ဆွဲ အနန္တမှာ
ကျွန်တော်တို့ ခြင်းတွေတောင်းတွေ ခေါင်းပေါ်က ခဏချရအောင်
လက်ဖျားလက်နားမှာတင် ပန်းခင်းတွေ ရှိကြောင်း နင်းခွပြီးမှသိခဲ့ကြ
ဟုတ်ခဲ့ပါတယ် ..... ဟုတ်ခဲ့ကြပါတယ် ..... ဟုတ်နေကြပါတယ်
ခင်ဗျားတို့ သိပ်ပြီး မကြိုးစားကြပါနဲ့
ခိုးရာပါပစ္စည်း အထုတ်ကြီးအထည်ကြီးနဲ့ ညတိုင်းညတိုင်း လင်းနိုင်ကြပါစေ ..... ..... .....
“ ဆုတောင်းမှတ်တမ်း ”
..... အမေ .....
..... (အဓိပတိဖွား၊ အင်္ဂါသား) .....
ခြေစုံကန်၊ အမိုးကာ၊ ထရံဖွင့်
ဟုတ်ကဲ့ အမေ သားကလူမိုက်ပါ
ကျွန်တော့ထီးရွက်တွေ အမေလဲ ပေးခဲ့တယ်
အိပ်ယာဝင်တေး နဲ့ အမေ ပုခက်လွဲ
ဝေသာလီ၊ ရောမ၊ အေသင်၊ အတ္တလန္တာ
ရာသီခွင်တွေ ရာသီပန်းတွေ တောင်ပြာတန်းအထိ ပွင့်ဖူးပေးပါ
`` ......................... ´´
ခြေပန်းလက်ကန် ဆန့်ထွက် နေချိန်မှာ
လက်ချောင်းတွေနဲ့ ရေးတဲ့ သဲဖတ်စာကို
ဖျက်လိုက ဖျက်ပါ ချစ်သူ
ရာသီစာ သာ ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း
ရှိုက်သံတိတ်တိတ်နဲ့ လွေ့ ..... ဝေး .....
တိုက်ပွဲကျမြေပြင်မှာ ဒီလူ `အ´ က
ပန်းပွင့်တွေ ဟုတ်တယ် ပန်းပွင့်တွေ
ဘယ်အချိန်မှာ ငါ ..... .....
ဘာတွေ ..... ဘယ်လို .....
တစ်ချိန်ချိန် ..... ..... တစ်ခုခုတော့ ..... တစ်ခုခုပေါ့
ချစ်သူ ..... ..... .....
ရေးခဲ့ပါသည် ..... ရေးခဲ့ပါသည်
စေ လို ရာ ညွှန် နိုင် သည် ..... ..... ..... ..... .....
`` ..... ..... မှတ်မိနေလိမ့်မည် ..... ..... ´´
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရုပ်ပြ နာမ်ပြအဖြစ်သုံး
`အသံ´ တို့ လူမဆန်ခဲ့ဘူး .....
လူမရွတ်တဲ့ အသံမို့ လူမဆန်တဲ့ပွဲ
သက်ရှိသက်မဲ့ကြား ... ရေရွတ်သူမကွဲပြားလည်း
လူမဆန်ဖို့ ရွတ်တွားညည်းသံ .... ခုတ်မောင်းသွားတယ်..
ဘာတွေ အပိုအဆစ် ထည့်ပေးထားခဲ့လိုက်လဲ
အထက်နဲ့အောက် ..... အနီစဲစဲဖွင့်
ဘယ်သူမှမတို့တဲ့ သက်ရောက်မှုမဲ့ တန်ပြန်ခြင်းမှာ
နေမဲ့ ... မီးမဲ့ ... အပူတွေ ဟပ်ထားတဲ့ လှိုင်းတွေ
.......................... ................................. ....................................
(၆၆၆) နှင့် စေတန်
၁၃ ရက်၊ သောကြာနေ့၊ မြင်းစီးသူရဲကောင်းများ
နဂါးခေါင်း နှင့် ပြဿနာ
ပြဿဒါး နက္ခတ် .... .....
`` .......... ........... ......... ......... ...........´´
တိတိကျကျ ညွှန်ပြရန် (သို့မဟုတ်) ခေါင်းစီးတင်ရန်
ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက် လှမ်းမှုတွေ
ကမ်း နဲ့ မလောက်တဲ့ လှမ်းမှုတွေ
ကြက်ဥ တစ်လုံး ၁၅၀/ိ
`သားရေ ..... သမီးရေ´
`ဖေဖေ မေမေ ဘယ်မှာလဲ´
သောပျောက် ..... ရှင်ပြေး ..... အပြုံး
အစားထိုး ..... ပြုပြင် ..... ဖေးမ .... ကူတွဲ
လက်တစ်ဆုံး ..... မျက်လုံးများ
ဖုန်းအမှတ် (xxxxxxxx) သို့ ဂရုဏာလက်များ ထပ်မံ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်သည်.
`အမျှ ..... အမျှ ..... အမျှ´ ..... ..... `သာဓု ..... သာဓု ..... သာဓု´
..... ညနေ .....
၅း၀၀ မှာ ၈း၀၀ အတွင်း
..... စကားစ .....
..... ဟယ်လို .....
အလှည့်ကျ ဗီးနပ်စ် ၀တ်ကျင်း
..... ကားဂိတ် .....
၃၀၀/ိ တန် ခရီးစဉ်များ
..... ရနံ့ .....
..... အလင်း .....
စူးအေး လင်းမြ ၀င်းရှ
..... စိုးရွံ့မှု .....
၂၀၀၈ ခုနှစ် အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်၏အရိပ်
..... အရည်ဖျော်ဒြပ်မဲ့ .....
`` မျက်မှန်နောက်ကွယ်မှ ရောင်ပြန် ´´
`` တန်ပြန်တိုက်စစ် ´´
`` မြှားဦးလှည့်သီဝရီ ´´
`` ကျွန်တော်နှင့် အပိုင်းအစများ ´´
`` ဒိုင်ယာရီ ´´
`` သီချင်းစာသား ´´
..... မှတ်တမ်း .....
နှင်းဖွဲ (၁၂) အပိုဒ်ခွဲ (၁၁)
အမှတ်စဉ် (၂) မှ
..... ပန်နိုရာ သေတ္တာ .....
..... မှတ်စု .....
အရောင်မပါသော ကျွန်ုပ်၏ နမ်မီးဆစ်အား
ခဏ မေ့ .....
ပြာပြာသလဲကောင်ကို ခဲ(ဂဲ)တစ်လုံး တည့်တည့်ပြေးရိုက်
မြဲမြဲတွဲထားပေးပါ ..... `ချစ်သူ´
တစ်ခြား ဘယ်သူ့လက်ဖျားမှာမှ မဖွင့်နိုင်လို့ပါ ..... ..... .....
ဒီဘက်ကို မြင်ပါ .....
ဟိုဘက်လမ်းက တို့နဲ့ ဆိုင်မှမဆိုင်တာ ချစ်သူရယ် .....
ယုံတယ် ..... ယုံကြည်ပါတယ် ..... ချစ်သူ
တောင်ပံမလို ... တေးသံသာမလို
ကိုယ်က ဥသြငှက်ဖြစ်ခွင့်ကို ငြင်းချင်တဲ့သူပါ .... ငြင်းပယ်မယ့်သူပါ .....
စုံမှိတ်ပစ်လိုက်ပြီ ..... ..... ......
မြဲမြဲ တွဲထားပေးလှည့်ပါ ..... `` ချစ်သူ ´´
ဘယ်လို လက်ကပေးတဲ့ မနက်ဖြန်ဖြစ်ဖြစ်
ငါ့လက်သင့်မခံတော့ဘူး ..... .....
အိပ်မက် = အိပ်မက်
ဆွဲနှုတ်ပစ်ကြမယ် ..... .....
လက်ရှစ်ဖက်နဲ့ ပစ်တဲ့ လက်နက်တွေ
တွန့်ကြောက်ဝပ်မှောက်မနေဘူး ..... .....
ဘာဆိုဘာမှ မလိုတော့ဘူး ..... .....
မလိုတော့ပါဘူး ..... .....
ဘယ်လမ်း ..... ဘယ်တောင် ..... ဘယ်ပင်လယ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်
ငါ့ခြေလှမ်းကို မတားပိတ်နိုင်တော့ပါဘူး ..... .....
ငါရောင့်ရဲ နေတတ်ပါပြီ ..... ..... .....
ပြန်မြင်နေရပြန်ရော.. ဘာလည်းတော့ မပြောဘူး
သုံး ... သုည ... တစ် ... သုည ... နှစ်
ဗီဒီယိုခေတ်ကြီးမှာ ဟိုသီချင်းထဲကလို သုံးရက်တစ်ကားပြီး
တစ်ခါတစ်လေ တိတ်တိတ် အော်ချင်ရဲ့
သူရောဂါမပေါ်ဘဲ အဲဒီနေ့က သေသွားတယ် .....
မောင် (သို့) ဦး AIDS
အသက် ( ... )
နောက်တစ်နေ့ မွန်းလွဲ (...) နာရီ တိတိ
လူမသေသော တလင်းပြင်၌ ဈာပနာ ပြုလုပ်မည် .....
အတ္တဟူသည့်အရာ၌ ပရတို့ ရောပြွန်းမှု အလျဉ်းမရှိခြင်း မဖြစ်ရ
လက်နက်ကြီးသံ ဆူညံညံများ မတိတ်ဆိတ်မှုတို့ မရှိခြင်း ဖြစ်စေရမယ်
သိပ်ကို တိုးလွန်းလို့ နားစည်တွေ ပွင့်လန်ထွက်သွားတယ် .....
သေဆုံးသွားကြသော်လည်း ရှင်သန်ခြင်းမရှိမှု မဖြစ်သေးပါ .....
လှိုင်းနီကြီးကတော့ နာမည်တစ်ခုစာ သက္ကရာဇ်မှတ်တမ်း ထင်းထင်းထွင်းသွားလေရဲ့ .....
အားလူးခင်းများကြား ပီကာဆိုကို မရှာတော့
ပြီးလျှင် မိုက်ဒက်ဘုရင် တယောမထိုးရ
မြတ်နိုးရုံ မြတ်နိုးမိပါတယ် ..... ချစ်သူ
သည် .... တစ်ခုခု .... သည် .... ခဏ .... သည်
အလင်းရောင်ရဖို့၊ လေ၀င်ဖို့၊ အပြင်ကို ငေးဖို့ ..... ..... ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပြူတင်းပေါက် ..... ရှိရင်းစွဲတွေအားလုံးကို ကာစီးဖို့ တပ်ထားတဲ့ လိုက်ကာ (သို့) ကန့်လန့်ကာ ... အကာအရံအားလုံးကို ခလုပ်ဝင်တိုက်ခွင့်လိုင်စင် ရထားတဲ့ လေ .... လေရဲ့အရိပ်ကို ရှာဖို့ထွက်လာတဲ့ အလင်းရောင် တစ်နည်းပြောရရင် တမာန်တော် ... ထင်ရတာပဲ ..... တောင်ပံတော့မပါလာဘူး ..... သူတို့တွေ ..... ..... ..... တမင်တကာလား မတော်တဆလား သိပ်တော့မကွဲပြားချင်ဘူး တွေ့ကြပြီ ..... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သေသေချာချာပြောနိုင်တာဆိုလို့ သူတို့တွေ့တာပဲရှိတယ် .... ပြူတင်းပေါက်ကို လိုက်ကာ(ကန့်လန့်ကာ) ကာတယ် ..... လိုက်ကာ(ကန့်လန့်ကာ) ကို လေ၀င်တိုးတယ် .... လေနောက်ကို အလင်းလိုက်တယ်... အားလုံး သူတို့ အလုပ် သူတို့ လုပ်နေကြတာဖြစ်လိမ့်မယ် .......... ဒါပေမယ့် .... ..... ..... တမင်တကာလား ...... တမင်တဆလား ... မတော်တကာလား .... မတော်တဆလား ..... သဘာဝလား .... တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ ... အဲဒါသေချာတယ် ဆိုပါတော့ ...........အသားစိုင်တစ်ခု လှဲလျောင်းနေတယ် (ကျွန်တော့်အထင်) ........ ခဏတာ အိပ်စက်ခြင်း ..... ထာဝရ အချိုးအကွေ့ ..... တစ်ခုခုရဲ့ အလိုတော်အရ ..... တစ်နေရာရာ ..... အပြီးသတ်လဲလျောင်းခြင်း ..... တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်လိမ့်မယ် .... နှစ်ခုစလုံးလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်ဘဲ... တစ်ခုမှမဟုတ်ပဲ ... လဲကျနေခြင်းသက်သက်လဲဖြစ်နိုင်တယ် .... ပြန်ထကောင်းထနိုင်သေးတယ်ပေါ့ .... သိပ်တော့ မရေရာလှပါဘူး ... လဲနေတယ်ဆိုတာလောက်တော့ မှန်လိမ့်မယ် .... ဆက်ပြောရအောင်တရှိန်ထိုး .... ဟုတ်တယ် သိပ်ပြီး တရှိန်ထိုးဆန်လွန်းလို့လားမသိဘူး ... ညှင်ညှင်သာသာ ထိုးဆင်းလာတဲ့အရာ... ထိတွေ့ .... ခုနက ပြောနေတဲ့ တစ်ခုခုကို ထိတွေ့ .... အသားစိုင် .... အလင်း တစ်ခုခုကတော့ ဖြစ်နေတယ် ... ဘာဖြစ်နေတာလည်း သိချင်လား ..... ပြောပြမယ်... အေးစက် တင်းကျပ် ဖြူဖျော့ .... သူတို့တွေ ထိတွေ့မှုမှာ တွေ့နေရတယ်.. ဖြစ်နေကြတယ်... ဘယ်က ဖြစ်တာလည်း တစ်ခုခုကလား ... နှစ်ခု လုံးကလား... ဒါမှမဟုတ် ... ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်သိပ်နားမလည်တော့ဘူး ...... လဲလျောင်းနေသောအရာ ... သက်ရှိ ဖြစ်လိမ့်မည်။ အလင်းနဲ့ လေ သူတို့လည်း သက်ရှိတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ အသက်တော့မရှူဘူးပေါ့ ...။ ဒီလိုနဲ့ ဟိုလိုနဲ့ ... ဟိုလိုလို ... ဒီလိုလို ... တစ်ခုခုရှိရင်ရှိ ဖြစ်ရင်ဖြစ်... ဖြစ်ပြီးရှိ ... ရှိပြီးဖြစ်... ရှင်းနေရင်းနဲ့ကိုရှုပ်လာပြီ သေချာတာကတော့ လှုပ်ရှားမှုကင်းမဲ့စွာနဲ့ အေးစက်တင်းကျပ်ချင်းတွေ အသက်ဝင်လာတယ် ဆိုတာသေချာတယ် ....။ တစ်နေရာ .... တည်နေရာ ... အခန်းတစ်ခုပေါ့လေ...။ မှိုင်းညစ်ညစ်တိုကသာ ပြည့်သိပ်လွှမ်းမိုးမှု ရှိနေသည်။ .... မတိမကျ အပိုင်းအခြားနဲ့ ကြိမ်နှုန်းမမှန်တဲ့ ကျိုကြားကျိုကြား ရှိုက်သံ .... တစ်စုံတစ်ခု အတွက် ၀မ်းနည်းနေပုံရတယ်... မနှစ်သိမ့်ပါနဲ့ ရှိပါစေ ... သူ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သူပေါ့။ တိုင်ကပ်နာရိသံ ``ချက်... ချက်´´ (ချပ်ချပ် လည်း ဖြစ်နိုင်သည်) .. လေတိုက်လို့ တစ်ချက်တစ်ချက် ဖျပ်ဖျပ်လက်သွားတဲ့ စာရွက်တွေရဲ့အသံ .... သူကနေအလင်းတိုက်ရိုက်မထိသလိုလို ထိသလိုလို ဒါပေမဲ့ ... အသံပါပဲ .... ပြီး၇င်တော့ အသံထွက်မရှိတဲ့ အရာတွေရဲ့အသံ .... တိတ်ဆိတ်နေတာလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့လေ ...။ တိုင်ကပ်နာရီက နံရံမှာကပ် .... စာရွက်တွေ စားပွဲခုံနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာ အပုံလိုက် ..... ရှိုက်သံတို့ ကိုယ်စားပြုအရပ်မျက်နှာ ..... ..... ၁၊၂၊၃၊၄၊ (ယောက်)(ခု) သက်ရှိ၊ သက်မဲ့၊ ဒြပ်ရှိ၊ ဒြပ်မဲ့ အတောင်ပံအပြတ်နဲ့ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ နတ်သမီး၊ ဘောင်လေးခုကြားမှာ ငြိမ်သက် .... သူ့မှာ ရှိုက်သံမရှိဘူး ...စကားသံမရှိဘူး.. စာရွက်သံမရှိဘူး.. နာရီသံမရှိဘူး... ဘာသံမှ သူ့စီမှာမရှိဘူး... ဒါပေမယ့်သူ ... တိတ်ဆိတ်မနေဘူး ...... သိပ်တော သေချာလှပါဘူးလေ .... လေတိုက်သွားတယ်... ပြူတင်ပေါက် တစ်ချက်လှုပ်..... လိုက်ကာကတော့ ငြိမ်သက် .... ရှခနဲ လင်းသွားသလိုပဲ ..။ အသေအချာကြိးလည်း မဟုတ်ပါဘူး .... နာရီသံထပ်ကြားရတယ်.... ခုနက ရှိုက်သံ ရှိပါသေးတယ်.. အားလုံးဒီတိုင်းပဲ ... တစ်နေရာ တည်နေရာတစ်ခုမှာပေါ့ ...........
ဖြစ်နိုင်ရင် ..... ..... ..... .....
ပေးပါ ..... ပေးပါ ..... ပေး ..... ပါ
ပျောက်သွား ..... ..... ထွက်ကျမလာတော့
ဒီလိုနဲ့ ..... ..... ..... .....
ရင်ဝှက်အံဆွဲရေ ..... .....
ငါ့ကို ကပျက်ကချော် သတိရပေးပါ
နင့်နာမည်ကို ရေရွက်ပါ့မယ် ..... .....
' ...... ' ' ...... ' ' ...... ' ' ...... '
လ ..... -ွ..... မ ..... -်..... -း..... နဲ့ 'လွမ်း'
ဒီလောက်ဆို တော်တန်ပါပြီ ..... ..... ..... တော်တန်ပါပြီကွယ် ..... ..... .....
ကြယ်သို့ ရူးသူ (သက္ကရာဇ် .. /.. /.. မှ .. /.. /.. ထိ )
PS2 ..... .....
ရယ်သံ ..... ..... .....
ငြင်းပယ်ချင်း ..... ..... .....
လှိုက်သံ + ရှိုက်သံ = တင်းမာမှု
ခြေလှမ်း၊ အကြည့် ..... .....
စာမျက်နှာ အခန် ( ..... ) အစ
အပြုံး - ၁၃ -
ဘီထိုဗင် + မိုးဇက် ≠ ၂၀၀၅ ဆိုနာတာ
တစ်ဘ၀လုံးစာ ယုံမှားခဲ့ပေါ့ `` မိကြယ်စင် ´´
..... ဝေ ..... .....
..... ..... လွင့် .....
ပေ ..... ..... .....
..... ..... ..... လေ
အ ..... ည ..... တ ..... ရ
မာန် // မာန်
အလွှာ ..... တစ်ထွာ
ဆို့ ..... နင့် ..... ကျော ..... ခိုင်း
တစ်ဘ၀လုံးစာ ကြွေကျခဲ့ပေါ့ `` မိကြယ်စင် ´´
၁ - ၁ = ၀
ပယ်ဖျက်ခြင်းခံ ... လူ ...
တစ ... တစ ... `ဟ´
အနည်မထိုင်ခင် မျက်နှာဖုံးစွပ်ခဲ့ .....
သဲရှပ်သံ ပွင့် လှစ်
ခရေ ..... ..... .....
ရူးချင်း ရွတ်တဲ့ နေ့များ ..... .....
တစ်ဘ၀လုံးစာ ခြွေပစ်ခဲ့ပေါ့ `` မိကြယ်စင် ´´
`` မိကြယ်စင် ´´
`` ... ... ´´ `` ... ´´ `` ... ... ´´ `` ... ´´
ဿလွှတ် .....ငါ့ လက်ကို၊၊နောက်၊ ငါ့ အင်္ကျီစကို၊ငါ့ နော...
ဖန် နဲ့ ယက်တဲ့ ပေဖူးလွှာ (သို့ ) `ချစ်သူဖတ်ဖို့ ကော...
သည် .... တစ်ခုခု .... သည် .... ခဏ .... သည် အလင်းေ...